Akụkọ - RFID isi ihe ọmụma
RFID mkpado windshield / ihe mmado
Mkpado akwa akwa UHF
RFID isi ihe ọmụma
1. Gịnị bụ RFID?
RFID bụ mbiri nke njirimara Frequency Radio, ya bụ, njirimara ugboro redio. A na-akpọkarị ya mgbawa eletrọnịkị inductive ma ọ bụ kaadị idi nso, kaadị nso, kaadị anaghị akpọtụrụ, akara eletrọnịkị, koodu mkpuchi elektrọn, wdg.
Usoro RFID zuru oke nwere akụkụ abụọ: Reader na Transponder. Ụkpụrụ nke ịrụ ọrụ bụ na onye na-agụ na-ebufe otu ugboro nke ike ikuku redio na-enweghị njedebe na Transponder iji mee ka transponder sekit zipu koodu ID nke ime. N'oge a, onye na-agụ na-enweta ID ahụ. Koodu. Transponder bụ ihe pụrụ iche na ọ naghị eji batrị, kọntaktị, na kaadị swipe ka ọ ghara ịtụ egwu unyi, yana paswọọdụ mgbawa bụ naanị otu n'ime ụwa nke enweghị ike iṅomi, yana nchekwa dị elu na ogologo ndụ.
RFID nwere ọtụtụ ngwa ngwa. Ngwa a na-ahụkarị ugbu a gụnyere ibe anụmanụ, ngwa mgbawa mgbochi izu ohi, njikwa ohere, njikwa ebe a na-adọba ụgbọala, akpaaka ahịrị mmepụta, na njikwa ihe. Enwere ụdị mkpado RFID abụọ: mkpado arụ ọrụ na mkpado na-agafe agafe.
Ihe na-esonụ bụ nhazi ime nke mkpado eletrọnịkị: ihe osise eserese nke ihe mejupụtara mgbawa + antenna na sistemụ RFID.
2. Gịnị bụ eletrọnịkị labelụ
A na-akpọ mkpado eletrọnịkị mkpado ugboro redio na njirimara ugboro redio na RFID. Ọ bụ teknụzụ njirimara akpaka anaghị akpọtụrụ nke na-eji mgbaama redio ugboro ugboro iji chọpụta ihe ebumnuche yana nweta data metụtara ya. Ọrụ njirimara anaghị achọ enyemaka mmadụ. Dị ka ụdị ikuku ikuku nke barcodes, teknụzụ RFID nwere ihe mgbochi mmiri, mgbochi magnetik, okpomọkụ dị elu, na ndụ ogologo oge, ogologo oge ịgụ akwụkwọ, data dị na label nwere ike ezoro ezo, ikike nchekwa data buru ibu, enwere ike ịgbanwe ozi nchekwa n'efu na uru ndị ọzọ. .
3. Gịnị bụ RFID technology?
Nchọpụta ugboro redio RFID bụ teknụzụ njirimara akpaaka na-anaghị akpọtụrụ, nke na-amata ihe ezubere iche ozugbo wee nweta data metụtara ya site na mgbama ugboro redio. Ọrụ njirimara anaghị achọ ntinye aka n'aka ma nwee ike ịrụ ọrụ n'ebe dị iche iche siri ike. Teknụzụ RFID nwere ike ịchọpụta ihe na-akpụ akpụ na-agba ọsọ ọsọ ma nwee ike ịchọpụta ọtụtụ mkpado n'otu oge, ọrụ ahụ dịkwa ngwa ma dịkwa mma.
Ngwaahịa ugboro redio dị mkpụmkpụ anaghị atụ egwu gburugburu ebe ọjọọ dị ka ntụpọ mmanụ na mmetọ uzuzu. Ha nwere ike dochie koodu mkpọchi na mpaghara ndị dị otú ahụ, dịka ọmụmaatụ, iji soro ihe dị n'ahịrị mgbakọ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. A na-ejikarị ngwaahịa igwe redio dị ogologo eme ihe na okporo ụzọ, yana anya njirimara nwere ike iru ọtụtụ iri mita, dị ka nchịkọta ụgwọ ego akpaaka ma ọ bụ njirimara ụgbọ ala.
4. Kedu ihe bụ isi akụkụ nke usoro RFID?
Sistemụ RFID kachasị mkpa nwere akụkụ atọ:
Tag: Ọ bụ ihe jikọrọ ọnụ na ibe. Mkpado ọ bụla nwere koodu eletrọnịkị pụrụ iche ma tinye ya na ihe ahụ iji mata ihe ezubere iche. Onye na-agụ: Ngwaọrụ na-agụ (na mgbe ụfọdụ na-ede) mkpado ozi. Emebere ka ọ bụrụ nke ejiri aka ma ọ bụ dozie;
Antenna: Nyefee mgbaama ugboro redio n'etiti mkpado na onye na-agụ.
Oge nzipu: Nov-10-2021
© Nwebiisinka - 2010-2020: Ikike niile echekwabara.